webdev, Author at BFI Education Services - Page 17 of 19
Universal Project Olympiad (UNIPO) is an online international project competition designed for students. The competition is conducted annually by Organizing Committee of UNIPO. Students who conductedaproject can participate in the contest in five categories; namely, physics, chemistry, ecology, invention and IT. Szu Myat Mon from year 10 and Khin Phone Wai from year 11 earned silver medal for their project on investigating “Antimalarial and antibacterial effect of gold...
August 7, 2017August 7, 2017by webdev
IB Diploma Programme (Grade11-12)
[vc_row][vc_column][stm_text_box button_color_scheme=”white-secondary” button_position=”center” title=”IB Diploma Programme (Grade11-12)” button_link=”url:http%3A%2F%2Flocalhost%2Fbfisecond%2Fib-diploma-progmmegrade11-12%2F||target:%20_blank|”]The International Baccalaureate ® (IB) was founded in Geneva, Switzerland in 1968 asanon-profit educational foundation….[/stm_text_box][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][stm_text_box button_color_scheme=”white-secondary” button_position=”center” button_link=”url:http%3A%2F%2Flocalhost%2Fbfisecond%2Figcseg9-10%2F|||”]Horizon has embraced the International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) curriculum…[/stm_text_box][/vc_column][/vc_row]
Secondary School (G6 – G8)
[vc_row][vc_column][stm_text_box button_color_scheme=”white-secondary” button_position=”center” title=”Secondary School (G6 – G8)” button_link=”url:http%3A%2F%2Flocalhost%2Fbfisecond%2Fsecondary-schoolg6-g8%2F||target:%20_blank|”]In our Secondary School Program, the students build on the solid foundations laid in the earlier years…[/stm_text_box][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][stm_text_box button_color_scheme=”white-secondary” button_position=”center” title=”Primary School (G1 – G5)” button_link=”url:http%3A%2F%2Flocalhost%2Fbfisecond%2Fprimary-school-g1-g5%2F||target:%20_blank|”]In our Primary School Program, we follow an established curriculum tailored to students’ needs…[/stm_text_box][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][stm_text_box button_color_scheme=”white-secondary” button_position=”center” title=”Kindergarten Program” button_link=”url:http%3A%2F%2Flocalhost%2Fbfisecond%2Fkindergarten-program%2F||target:%20_blank|”]Over the years, Horizon has been implementing activity-rich preschool programme to develop childrens motor, mental and physical skills. [/stm_text_box][/vc_column][/vc_row]
အများပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေငြာခြင်း။ မြန်မာစာသင်ကြားခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိကြောင်းတို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကျောင်းနှင့်ကုမ္ပဏီအားစစ်ဆေးမေးမြန်းနေမှုအပေါ် အများပြည်သူများအားအသိပေးပြောကြားလိုပါသည်။ ၄င်းဖြစ်ရပ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအားနားလည်လွဲမှားခြင်းဟုကျွန်ုပ်တုိ့ယုံကြည့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျောင်းသည် Cambridge မှကြီးမှူးသော နိုင်ငံတကာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း ဖြစ်သည့် Cambridge နှင့် IB Diploma သင်ရိုးညွှန်းတမ်း များကိုသာ သင်ကြားပေးသောကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတကာနှင့်ပက်သက်သောအစီအစဉ်များမှာ ကျောင်းသားများ၏ ကိုယ်ပိုင် ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို တိုးတက်ပြန့်ပွား စေရန် ပံ့ပိုးပေးသော ကျောင်းဖြစ်ပါသည်၊ ကျောင်းသားအများစုမှာ မြန်မာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများဖြစ်သည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ၏စာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်တွင် မြန်မာဘာသာစကား နှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့ကိုထည့်သွင်း သင်ကြားရပါသည်။၄င်းအစီအစဉ်မှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဘာသာစကားကို နားလည်လက်ခံနိုင်စေရန် ကူညီထောက်ပံ့ပေးသော အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အခြားနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုလည်း မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဘာသာစကားကိုဒုတိယဘာသာရပ်ဖြစ်သင်ကြားပေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းမှနိုင်ငံတကာနှင့်ပက်သက်သော အစီအစဉ်များ ဖြင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။ ယင်းအခြေအနေ ကိုမကြာခင်အချိန်တွင်ဖြေရှင်း...
August 4, 2017August 4, 2017by webdev
Our school teachers with parents were delighted to welcome our students from Genius olympiad which was held in USA. Our students brought home 1 gold,3silver and3honourable mentions. We proudly congratulate our students on their remarkable achievements and wish themacontinuous success in the future.
August 3, 2017August 3, 2017by webdev
December 1, 2015December 1, 2015by webdev